Xabag laba-dhinac leh
Cajalad tuubbada marada ah
Dahaarka bireed ee dahaaran
Cajaladda korantada ee PVC
Sida Loo Saarayo Xabagta Xabagta
Haraaga cajaladda tuubada waxaa lagu yarayn karaa codsi habboon waxaana laga saari karaa habab kala duwan. Cajaladu waa qalab cajiib ah oo lagu xalliyo dhibaatooyin kala duwan, laga bilaabo hagaajinta shaqada ilaa mashaariicda guriga. Kala duwanaanshaha cajaladda tuubada iyo xoogga waxay ka timaadaa koollada ku salaysan caagga. Hadhaaga adhesivkan...
Waa maxay Cajaladda Foil?
Cajalada birta ah waxaa badanaa laga sameeyaa aluminium, laakiin sidoo kale waxay ka koobnaan kartaa dhalo ama waxaa laga samayn karaa rasaas, naxaas, daasad daasad ah, iyo bir. Cajaladda biilku waxay leedahay faa'iidooyin badan tan iyo markii walaxda ay u hoggaansami karto noocyo badan oo kala duwan oo dusha sare ah, oo sidaas awgeed waxay leedahay codsiyo badan oo kala duwan oo ku saabsan warshadaha iyo mashaariicda. Alu...
Waa maxay Tape Laba-dhinac ah?
Waxa la sameeyay iyada oo la adeegsanayo lakabka dhejiska dhuuban ee dhinac kasta oo ka mid ah walxaha substrate side, cajalad laba-gees ah, oo sidoo kale loo yaqaan cajalad labajibbaaran ama cajalad laba waji leh, ayaa si ballaaran loo adeegsadaa warshado aad u tiro badan oo loogu talagalay codsiyada sida isku-xidhka, haysashada. , Kor-u-qaadista, Kala-baxa, iyo Baakadaha. Sida cad,...
Farqiga u dhexeeya cajalad bireed aluminium iyo fiberglass cajalad bireed aluminium
Cajaladda aluminiumka aluminiumku waa alaabta ceeriin iyo kaaliyaha ugu weyn ee qaboojiyaha iyo dhirta wax soo saarka qaboojiyaha. Isticmaalka xabagta cadaadiska-xasaasiga ah ee tayada sare leh, dhejinta wanaagsan, dhejinta xooggan, ka hortagga gabowga iyo saameynaha kale. Waxqabadka kuleylka kuleylka si weyn ayaa loo hagaajiyay. Cajalad biil aluminium ah oo la isticmaalay...
Cajalad aluminium fiberglass ah
Cajalad aluminium fiberglass ah waa cajalad xoog badan oo dabacsan oo leh xoog cufan, dalool iyo iska caabin jeexjeex ah. Xabagta xasaasiga ah ee cadaadiska, waxay si fiican ugu dhegtaa sagxadaha kala duwan iyo ka sarreeya substrates aan joogto ahayn ama aan sinnayn. Cajaladani waa iftiin iyo kuleyl ka tarjumaysa. Waa iska caabin kiimiko...
Codsiga cajalad aluminium ah
Cajalada aluminiumka ah ee aluminiumka ah, iyadoo la isticmaalayo xabagta xasaasiga ah ee cadaadiska tayada sare leh, viscosity wanaagsan, adhesion xoog leh, gabowga ka hortagga iyo saameynaha kale. Waxqabadka dahaarka ayaa si weyn loo hagaajiyay, qeexitaanadu waa (0.05mm-0.08mm) ballac iyo dherer kala duwan. Cajalad bireed aluminium ah waxaa loo isticmaalaa ku dhejinta wadajirka ah ee a...
Waa maxay Cajaladda Aluminium Foil, Sax ahaan?
Foornada aluminiumka ayaa markii ugu horreysay la helay 1888-kii, wax-soo-saarka ganacsiga ee Maraykanku wuxuu bilaabmay 1913. Lagu abaalmariyay tayada ilaalinta iyo muuqaalka soo jiidashada ee weelasha iyo baakadaha, waxaa si ballaaran loo isticmaalay dagaalkii labaad ee aduunka si loo ilaaliyo xirmooyinka, capacitors korantada, iyo dahaarka. Dagaalka kadib...
Cajaladda laba-geesoodka ah, xumbo laba-geesood ah, sida loo saaro raadadka dhammaan noocyada cajaladda laba-geesoodka ah?
by admin 20-07-23
Nolol maalmeedkeena, inta badan waxaan isticmaalnaa cajalad, meelo kala duwanna, nooca cajaladda la isticmaalo ayaa sidoo kale ka duwan. Inkasta oo cajaladdu ay aad ugu habboon tahay in la isticmaalo, waxaa jira dhibaato caadi ah, taas oo ah, aad bay u adag tahay in la saaro raadadka uu ka tagay cajaladda ka dib isticmaalka. Dad badan ayaa dooran doona inay isticmaalaan shukumaan qoyan...
Habka dhismaha ee birta qaab dhismeedka birta birta ah ee aan biyuhu biyuhu lahayn ee birta birta ah.
(1) Marka loo eego farqiga iyo ballaca wadajirka ah ee nooca saxanka birta ama qaybta wadajirka ah, iyo marka loo eego shuruudaha naqshadeynta injineernimada, cabbirka qeexida ayaa la doortaa. (2) Nadiifi nadiifinta kala-goysyada saxanka birta ah. (3) Ka bilow hal daraf ee saxanka birta, si tartiib ah u fur sharoobada xabagta ee laba-geesoodka ah al...
Sida loo gaaro 300 ℃ caabbinta heerkulka sare ee cajalad aluminium ah
Cajaladda aluminiumku waa alaabta ugu muhiimsan ee ceyriinka iyo kaaliyaha ah ee qaboojiyaha iyo warshadda qaboojiyaha, iyo sidoo kale alaabta ceeriin ee lagama maarmaanka u ah qaybta qaybinta walxaha kuleylka. Si weyn loogu isticmaalo qalabka korontada, baabuurta, buundooyinka, dhismaha iyo warshadaha kale. Laakiin sida ay...
Waa maxay isticmaalka cajalad aluminium ah
Marka ay timaado cajalad aluminium ah, waxaan aaminsanahay inaad taqaanid. Nolol maalmeedkeena, waxaan inta badan arki karnaa alaabta qalabka korontada. Kuwa soo socdaa waa hordhac kooban oo ku saabsan isticmaalka cajalada aluminium? Ugu horreyntii, cajaladda aluminiumku waxay ka samaysan tahay adhesi cadaadis-xasaasi ah oo tayo sare leh ...
Wax soo saarka iyo sifooyinka guud ee cajaladda kraft paper
Cajaladda warqadda kraft-ka ah ee aan sida caadiga ah u isticmaalno waxay ka samaysan tahay warqad kraft ah oo ah alaabta aasaasiga ah, oo lagu dahaadhay koollada biyaha ku milma oo la qalajiyey. Hadda waxay u soo baxday cajaladda kraft paper ee aynu naqaanay. Cajaladaan warqadaha kraft-ga ah waxay leeyihiin ku dheggan xooggan, iyo isticmaalka warqadda kraft-ka dartiis, streetka xajinta
© Xuquuqda daabacaadda - 2010-2019: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin. Talooyin - Alaabooyinka Kulul - Khariidadda goobta - AMP Mobile
Cajalad bireed aluminium ah oo aan dabci lahayn, Naqshadihii Cajaladda Aluminium-ka-Beediska ah, Cajaladda Dahaarka ee Foil, Cajaladda Aluminium-ka ee Dhuxusha ee Tuubooyinka, Cajaladda Dahaarka ee Aluminium Foil, Cajalad Caare ah oo Aluminium ah,